သင့်မစင်နှင့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ........................ ~ Latha Mobile 0945 000 1727
သင့်မစင်နှင့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ........................
1:49 AM ko pae Lay No comments
Posted by: Ko Myo on Tuesday, July 01, 2014 Categories: ကျန်းမာရေးနှင့် ဆေးပညာ
မပြောရင်လည်း မပြောလို့ . ပြောပြန်ရင်လည်း ရှက်စရာလိုလို၊ ရွံစရာလိုလို ဖြစ်နေတာက မစင် ဆိုင်ရာ လူ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒီကိစ္စကို အချင်းချင်း ပြောကြဆိုကြမှု နည်းတာကြောင့် ဝမ်းနဲ့ ဆိုင်ရာ ရောဂါ အမျိုးမျိုး ဖြစ်တတ် ကြပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ အဲ့ဒီလို မဖြစ်အောင် ရေးသား ဖော်ပြ လိုက်ရ ပါတယ်။
၁။ မြေပဲစံ ကဲ့သို့ မာမာ၊ အတုံးခဲခဲများ
(Separate hard limps, like nuts)
ယင်းကဲ့သို့ မစင်ဟာ ရေဓာတ်နဲ့ အမျှင်ဓာတ် ချို့ယွင်းနေတဲ့ လူ့ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပြသပြီး ရေများများ သောက်ရန် နှင့် အသီးအရွက် များများစားရန် လိုအပ်ပါတယ်။
၂။ ပျော့ပြောင်းချောမွေ့၍ ဝက်အူချောင်း ပုံသဏ္ဍာန်
(Sausage shaped, smooth and soft)
ကျန်းမာရေး ကောင်းသူ တစ်ယောက်၏ မစင် ဖြစ်သည်။
၃။ ရေကဲ့သို့ အရည်များ၊ အတုံးအခဲ မပါ
(Watery, no solid pieces, all liquid)
ဝမ်းပျက် ဝမ်းလျှော ဖြစ်နေသော ကျန်းမာရေး အခြေအနေကို ပြသပြီး ခန္ဓာကိုယ် တစ်ခုလုံးမှ ရေများကို အစာအိမ်က ဆုပ်ယူနေခြင်း ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါကြောင့်မို့ ယင်းကဲ့သို့ ဖြစ်နေစဉ် အချိန်အတွင်း ရေများများ သောက်ဖို့ရန် လိုအပ်ပါတယ်။ မဟုတ်ရင် အားအင်ကုန်ခမ်းပြီး ကျန်းမာရေး ပိုမို ဆိုးရွား သွားပါလိမ့်မယ်။
၄။ ဝက်အူချောင်းကဲ့သို့၊ သို့သော် မရှည်လျား
(Sausage shaped, but lumpy)
အမျှင်ဓာတ်နှင့် ရေဓာတ် အင်မတန် နည်းတဲ့ ပထမ အမျိုးအစားလောက် မဟုတ်သော်လည်း ရေ နှင့် အသီးအရွက် ဦးစားပေး စားရန် လိုအပ်သော ကျန်းမာရေး အခြေအနေ ဖြစ်ပါတယ်။
၅။ အနားညီညာသော အရည်ပျစ် အတုံး အစက်
(Soft blobs and clear-cut edges)
ယင်းမစင်အမျိုးအစား ဖြစ်ပါက ကျန်းမာရေး ကောင်းသော်လည်း တစ်နေ့ကို တစ်ကြိမ်သာ အိမ်သာ တက်ခြင်းဖြင့် မလုံလောက်ပါ။
၆။ ဖောင်းကြွကြွ မညီမညာ ဝက်အူချောင်း ပုံစံ
(Sausage shaped, but with cracks on surface)
ပုံမှန် ဖြစ်သော်လည်း ရေများများ သောက်ရန် လိုအပ်နေသေးသော အခြေအနေ
၇။ အနားမညီညာ အစွန်းထွက် အမျှင်ပါဝင်သော ဈေးပျစ်ပျစ် အတုံးများ
(Fulffy pieces with ragged edges,amushy tool)
ကျန်းမာရေး ကောင်းနေသော်လည်း ဝမ်းပျက်ဝမ်းလျှော ဖြစ်လာနိုငတော့မည် အခြေအနေ
၈။ နူးညံ့ပြီး ကပ်စေးသော မစင်
(Soft and stick to the side of the bowl)
မစင်တွင် အဆီဓာတ် များနေသည်ကို ပြသပြီး တစ်နည်းအားဖြင့် ခန္ဓာကိုယ်က အဆီဓာတ်ကို မဆုပ် ယူကြောင်းကို ပြသခြင်းတစ်မျိုး ဖြစ်ပါတယ်။ အဆီဓာတ် မဆုပ်ယူခြင်းကြောင့် ယင်းမစင်ပိုင်ရှင်ဟာ ပိန် တဲ့သူ အများစု ဖြစ်ပါတယ်။ မပိန်ရင်တောင် ပိန်ဖို့အတွက် အလားအလာများပြီး အစာရှည်ရန် ထုတ်ပေး သော ဂလင်း မထွက်ရှိခြင်း ကြောင့်လည်း ဖြစ်သည်။ သို့သော် အဆီများသော အာလူးကြော်၊ အသင့် ကြော်ဆီများ အစားအစာ ရှောင်ရန် လိုအပ်နေသေးပြီး အသား၊ ငါး၊ အသီးအရွက်၊ ဂျုံ တို့ကို မျှမျှတတ စားပေးရန် လိုအပ်သည်။
မန္တလေးတွင် ပဋိပက္ခဖြစ်ပွား...သေနတ်ဖောက်ပြီး လူစုခွဲ...
ဂျပန်ကထုတ်တဲ့ iPhone Case...(Funny!).................
အနုမြူကားတွေပြန်လာပြီ၊ ကားတစ်စီးကို နှစ် ၁၀၀ ကြာ စ...
ဘွတ်ကီး ပေါက်ဈေးနုန်းများ နှင့် ဂိုးစဂိုးများ2.7....
♪ ပြည်ပဆက်သွယ်ရေး ကုမ္ပဏီများ၏ မိုဘိုင်းအင်တာနက် အသ...
ချစ်သူ ဆရာဝန် မိန်းကလေးကို ဓားဖြင့် ၁၁ ချက် ထိုးသတ...
အင်တာနက် မရှိဘဲနှင့်ပင် လူအများနှင့် အပြန်အလှန် မက...
#‎ဘော့လုံးအကြောင်းနားမလည်တဲ့‬ အမျိုးသမီးတွေနဲ့ ဘော...
သင့်မစင်နှင့် ကျန်းမာရေး အခြေအနေ.....................
ဇူလှိုင်လ ခုနှစ်ရက် သားသမီးများအတွက် ဟောစာတမ်း........